Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/22 Jiona 2014 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/22 Jiona 2014
kokoa (nitranga in-1) : Ohatra ny hoe tian'ireo mpitandro filaminana hamafisina kokoa ny fifehezan'izy ny fiarahamoninaThai. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
coup (nitranga in-1) : MT @c4sparks: Three finger anti-thai coup salute offered fleetingly by these woman at a BKK mall pic. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
atolotr' (nitranga in-1) : MT @c4sparks: fiarahabana miserana fanoherana ny fanonganam-panjakana amin'ny rantsana telo atolotr'ireo vehivavy ao amin'ny tranombarotra BKK pic. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
rehefa (nitranga in-1) : Nisy finday roa azonay nampiasaina araka izay tianay teo fa tsy maintsy manome ny laharana ary misy olona mijoro eo akaikinay eo, mihaino rehefa miantso izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Nambaran' (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Lillian Suwanrumpha, Fizakàmanana @Demotix (5/31/2014)
Nambaran'ny tafi-panjakana Thailande tamin'ny 20 May ny lalàna mifehy ny tany misy hotakotaka ary dia nisy ny fanonganam-panjakana roa andro taty aoriana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
maintsy (nitranga in-1) : Nisy finday roa azonay nampiasaina araka izay tianay teo fa tsy maintsy manome ny laharana ary misy olona mijoro eo akaikinay eo, mihaino rehefa miantso izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
karazana (nitranga in-1) : Nanaitra ahy fa toy ny any anaty karazana fandaharana ‘Big Brother' izany foana izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Hafahafa (nitranga in-2) : Hafahafa izany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hivory (nitranga in-1) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
rantsana (nitranga in-5) : manao ny fiarahabana amin'ny rantsana telo ho fanehoana ny fahalalahana, ny fitoviana ary ny firahalahiana ireo mpanohitra ny fanonganam-panjakana any Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nahasakana (nitranga in-1) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
aoriana (nitranga in-2) : Misy lahatsary izay nanjary nalaza tato aoriana mampiseho mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana manery vehivavy mpanao fihetsiketsehana iray hiditra ao anaty fiarakaretsaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Isan' (nitranga in-1) : Isan'ny toromarika voalohan'ny fitondrana mpanongam-panjakana tany Thailandy ny tsy fahazoan'ny olona maherin'ny dimy mivorivory imasom-bahoaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
famotehana (nitranga in-1) : Mety ho tafaverin'ny tafika ihany ny fandriam-pahalemana eny an-dalàmben'i Bangkok, renivohitra, saingy vita amin'ny famotehana miandàlana ny fahalalahan'ny olom-pirenena izany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Pravit (nitranga in-1) : Ohatra ny hoe mpandray anjara amin'ny fandaharana zava-misy marina Big Brother ( Razoky be) i Pravit Rojanaphruk, mpanao gazety mamim-bahoaka,:
Lazaina fa tsy mahazo mampiasa finday izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mandeha (nitranga in-1) : Fahitalavitra maherin'ny 600 mandeha avy amin'ny zanabolana no nakaton'ny tafika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fandraràna (nitranga in-1) : com/2qUOS59748
Mbola mihantsy ny fandraràna ataon'ny tafika amin'ny fiarahana mamaky boky mangina eny amin'ny toerana vory vahoaka ihany ireo mpanohitra ny fanonganam-panjakana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fiarakaretsaka (nitranga in-1) : Misy lahatsary izay nanjary nalaza tato aoriana mampiseho mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana manery vehivavy mpanao fihetsiketsehana iray hiditra ao anaty fiarakaretsaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
sorabaventy (nitranga in-1) : Tsy milanja sorabaventy ry zareo, tsy midina an-dalàmbe fa mipetraka amin'ny toerana be olona ary mamaky boky momba ny politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mpianatra (nitranga in-1) : Nampanantsoin'ny tafika ireo mpianatra eny amin'ny Oniversite sy mpanao gazety an-jatony andro vitsy lasa izay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
faritra (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
vita (nitranga in-1) : Mety ho tafaverin'ny tafika ihany ny fandriam-pahalemana eny an-dalàmben'i Bangkok, renivohitra, saingy vita amin'ny famotehana miandàlana ny fahalalahan'ny olom-pirenena izany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
izay (nitranga in-4) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
manery (nitranga in-2) : Misy lahatsary izay nanjary nalaza tato aoriana mampiseho mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana manery vehivavy mpanao fihetsiketsehana iray hiditra ao anaty fiarakaretsaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
rehetra (nitranga in-1) : Hafahafa ny zavatra rehetra. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
miantso (nitranga in-1) : Nisy finday roa azonay nampiasaina araka izay tianay teo fa tsy maintsy manome ny laharana ary misy olona mijoro eo akaikinay eo, mihaino rehefa miantso izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
araka (nitranga in-1) : Nisy finday roa azonay nampiasaina araka izay tianay teo fa tsy maintsy manome ny laharana ary misy olona mijoro eo akaikinay eo, mihaino rehefa miantso izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
style (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto misy sarin'ireo mpanao fihetsiketsehana vitsivitsy tany Bangkok miaraka amin'ny fiarahabana ‘Hunger Games' :
Hunger Games style. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
lazainy (nitranga in-1) : Fa raha misy tsy afaka hiara-miasa amin'ny tafika dia lazainy fa hampiasa ” fanafody henjana” ry zareo hampilamina ny toe-draharaha. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
manohitra (nitranga in-1) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mpandray (nitranga in-1) : Ohatra ny hoe mpandray anjara amin'ny fandaharana zava-misy marina Big Brother ( Razoky be) i Pravit Rojanaphruk, mpanao gazety mamim-bahoaka,:
fanaovan' (nitranga in-1) : Zarain'i Thanapol Eawsakul ny zavatra hitany tao amin'ny biraon'ny tafika :
Fomba politika ny fanaovan'ny tena tatitra. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Samuy (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nampitandreman' (nitranga in-1) : Ny mahaliana dia nampitandreman'ny mpanolotsaina iray ao amin'ny fitondrana ny vahoaka fa mety hanjadian'ny ” aretin-tsaina noho ny fanjifàna vaovao marobe tafahoatra”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
momba (nitranga in-2) : Tsy milanja sorabaventy ry zareo, tsy midina an-dalàmbe fa mipetraka amin'ny toerana be olona ary mamaky boky momba ny politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mihaino (nitranga in-1) : Nisy finday roa azonay nampiasaina araka izay tianay teo fa tsy maintsy manome ny laharana ary misy olona mijoro eo akaikinay eo, mihaino rehefa miantso izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
manampahefana (nitranga in-1) : Nolazain'ireo manampahefana fa nalefa any amin'ny foiben'ny mpitandro filaminana io vehivavy io mba hohadihadiana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hampiasa (nitranga in-1) : Fa raha misy tsy afaka hiara-miasa amin'ny tafika dia lazainy fa hampiasa ” fanafody henjana” ry zareo hampilamina ny toe-draharaha. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hilazàna (nitranga in-1) : Betsaka ireo naka ny fomba fiarahabana amin'ny fananganana rantsana telo avy tamin'ilay sarimihetsika Hollywood ‘Hunger Games' mba hilazàna ny fanirian'ny olona ho amin'ny “fahafahana, fitoviana ary firahalahiana”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Chong (nitranga in-2) : Reading Orwell's book “1984″ at Chong Nonsi station in Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
vahoaka (nitranga in-5) : Sary avy amin'i Gonzalo Abad, Fizakàmanana @Demotix (6/1/2014)
Fa etsy ankilan'ny fiarahabana amin'ny rantsana telo, dia manao hetsika famakian-teny amin'ny toerana vory vahoaka ireo mpanohitra mba hanamafisana ny fanoheran'izy ireo ny fanonganam-panjakana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
laharana (nitranga in-1) : Nisy finday roa azonay nampiasaina araka izay tianay teo fa tsy maintsy manome ny laharana ary misy olona mijoro eo akaikinay eo, mihaino rehefa miantso izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Betsaka (nitranga in-1) : Betsaka ireo naka ny fomba fiarahabana amin'ny fananganana rantsana telo avy tamin'ilay sarimihetsika Hollywood ‘Hunger Games' mba hilazàna ny fanirian'ny olona ho amin'ny “fahafahana, fitoviana ary firahalahiana”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
woman (nitranga in-1) : MT @c4sparks: Three finger anti-thai coup salute offered fleetingly by these woman at a BKK mall pic. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
anefa (nitranga in-2) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fananganana (nitranga in-1) : Betsaka ireo naka ny fomba fiarahabana amin'ny fananganana rantsana telo avy tamin'ilay sarimihetsika Hollywood ‘Hunger Games' mba hilazàna ny fanirian'ny olona ho amin'ny “fahafahana, fitoviana ary firahalahiana”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Fangatahana (nitranga in-1) : Fangatahana fiaraha-miasa izany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Lillian (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Lillian Suwanrumpha, Fizakàmanana @Demotix (5/31/2014)
Nonsy (nitranga in-2) : Reading Orwell's book “1984″ at Chong Nonsi station in Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
aorian' (nitranga in-2) : Nampanantena ny hikarakara fifidianana ny tafika saingy aorian'ny filaminan'ny fanjakana sy fanavaozana ny rafitra politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
famakiana (nitranga in-1) : Fa mbola io mpanolotsaina io ihany koa anefa no nandrisika ny vahoaka ho tony amin'ny tsy famakiana afa-tsy ny vaovao omen'ireo loharano tantànan'ny fanjakana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
protesters (nitranga in-1) : Silent anti-#ThaiCoup protesters. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hanjadian' (nitranga in-1) : Ny mahaliana dia nampitandreman'ny mpanolotsaina iray ao amin'ny fitondrana ny vahoaka fa mety hanjadian'ny ” aretin-tsaina noho ny fanjifàna vaovao marobe tafahoatra”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
alàlana (nitranga in-1) : Fahitalavitra 40 no nahazo alàlana handefa ny fandaharana mahazatra azy tamin'ity herinandro ity isan'izany ny CNN, BBC ary ireo fandaharana sarimiaina fijerin'ny olona. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Nampanantsoy (nitranga in-1) : Nampanantsoin'ny tafika ireo mpianatra eny amin'ny Oniversite sy mpanao gazety an-jatony andro vitsy lasa izay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fanjifàna (nitranga in-1) : Ny mahaliana dia nampitandreman'ny mpanolotsaina iray ao amin'ny fitondrana ny vahoaka fa mety hanjadian'ny ” aretin-tsaina noho ny fanjifàna vaovao marobe tafahoatra”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fanavaozana (nitranga in-1) : Nampanantena ny hikarakara fifidianana ny tafika saingy aorian'ny filaminan'ny fanjakana sy fanavaozana ny rafitra politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nakaton' (nitranga in-1) : Fahitalavitra maherin'ny 600 mandeha avy amin'ny zanabolana no nakaton'ny tafika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
foiben' (nitranga in-1) : Nolazain'ireo manampahefana fa nalefa any amin'ny foiben'ny mpitandro filaminana io vehivavy io mba hohadihadiana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
izahay (nitranga in-3) : Ohatra ny hoe mpandray anjara amin'ny fandaharana zava-misy marina Big Brother ( Razoky be) i Pravit Rojanaphruk, mpanao gazety mamim-bahoaka,:
Ireto (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto misy sarin'ireo mpanao fihetsiketsehana vitsivitsy tany Bangkok miaraka amin'ny fiarahabana ‘Hunger Games' :
Fahitalavitra (nitranga in-2) : Fahitalavitra maherin'ny 600 mandeha avy amin'ny zanabolana no nakaton'ny tafika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fitoviana (nitranga in-2) : manao ny fiarahabana amin'ny rantsana telo ho fanehoana ny fahalalahana, ny fitoviana ary ny firahalahiana ireo mpanohitra ny fanonganam-panjakana any Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
apetraka (nitranga in-1) : Maro amin'izy ireo no mpanohitra ary tsy manaiky ny Junta (fitondràna miaramila apetraka aorian'ny fanonganam-panjakana). (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
izany (nitranga in-8) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mahery (nitranga in-2) : Isan'ny toromarika voalohan'ny fitondrana mpanongam-panjakana tany Thailandy ny tsy fahazoan'ny olona maherin'ny dimy mivorivory imasom-bahoaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mandika (nitranga in-1) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hampilamina (nitranga in-1) : Fa raha misy tsy afaka hiara-miasa amin'ny tafika dia lazainy fa hampiasa ” fanafody henjana” ry zareo hampilamina ny toe-draharaha. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hetsika (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Gonzalo Abad, Fizakàmanana @Demotix (6/1/2014)
falehan' (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nitantara (nitranga in-1) : Soa ihany fa afaka sahady ny sasany tamin'izy ireo ka afaka nitantara ny zavatra niainany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fifidianana (nitranga in-2) : Nampanantena ny hikarakara fifidianana ny tafika saingy aorian'ny filaminan'ny fanjakana sy fanavaozana ny rafitra politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
vaovao (nitranga in-2) : Ny mahaliana dia nampitandreman'ny mpanolotsaina iray ao amin'ny fitondrana ny vahoaka fa mety hanjadian'ny ” aretin-tsaina noho ny fanjifàna vaovao marobe tafahoatra”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
miandàlana (nitranga in-1) : Mety ho tafaverin'ny tafika ihany ny fandriam-pahalemana eny an-dalàmben'i Bangkok, renivohitra, saingy vita amin'ny famotehana miandàlana ny fahalalahan'ny olom-pirenena izany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Orwell' (nitranga in-1) : Reading Orwell's book “1984″ at Chong Nonsi station in Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Nampanantena (nitranga in-1) : Nampanantena ny hikarakara fifidianana ny tafika saingy aorian'ny filaminan'ny fanjakana sy fanavaozana ny rafitra politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nisy (nitranga in-2) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
manao (nitranga in-3) : manao ny fiarahabana amin'ny rantsana telo ho fanehoana ny fahalalahana, ny fitoviana ary ny firahalahiana ireo mpanohitra ny fanonganam-panjakana any Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hentitra (nitranga in-1) : Mbola tena arahana akaiky ny haino aman-jery ary hentitra ny tafika amin'ny fampitandremana ny mpiserasera amin'ny aterineto tsy hitsikera ny fitondrana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fifehezan' (nitranga in-1) : Ohatra ny hoe tian'ireo mpitandro filaminana hamafisina kokoa ny fifehezan'izy ny fiarahamoninaThai. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
vehivavy (nitranga in-3) : Misy lahatsary izay nanjary nalaza tato aoriana mampiseho mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana manery vehivavy mpanao fihetsiketsehana iray hiditra ao anaty fiarakaretsaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
George (nitranga in-1) : Ankoatra ny boky momba ny politika Thai, dia tian'izy ireo ny mamaky ny boky 1984-n'i George Orwell. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Kevin (nitranga in-1) : com/2qUOS59748
— Kevin Van Campenhout (@Beursparels) May 29, 2014 Mpanohitra am-pahanginana ny #ThaiCoup (fanonganam-panjakana Thai). (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fijery (nitranga in-1) : Fahitalavitra 40 no nahazo alàlana handefa ny fandaharana mahazatra azy tamin'ity herinandro ity isan'izany ny CNN, BBC ary ireo fandaharana sarimiaina fijerin'ny olona. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hiditra (nitranga in-1) : Misy lahatsary izay nanjary nalaza tato aoriana mampiseho mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana manery vehivavy mpanao fihetsiketsehana iray hiditra ao anaty fiarakaretsaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
aterineto (nitranga in-1) : Mbola tena arahana akaiky ny haino aman-jery ary hentitra ny tafika amin'ny fampitandremana ny mpiserasera amin'ny aterineto tsy hitsikera ny fitondrana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
toerana (nitranga in-4) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Silent (nitranga in-1) : Silent anti-#ThaiCoup protesters. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
afaka (nitranga in-4) : Soa ihany fa afaka sahady ny sasany tamin'izy ireo ka afaka nitantara ny zavatra niainany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Triyos (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
Nahita fomba hafa hanehoany ny fanoherany ny lalànan'ny tany misy hotakotaka ampiharina any Thailandy ireo mpanohitra. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
twitter (nitranga in-5) : twitter. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mety (nitranga in-1) : Ny mahaliana dia nampitandreman'ny mpanolotsaina iray ao amin'ny fitondrana ny vahoaka fa mety hanjadian'ny ” aretin-tsaina noho ny fanjifàna vaovao marobe tafahoatra”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nadika (nitranga in-1) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
· Vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  twitter facebook reddit googleplus. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
reddit (nitranga in-1) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
ihany (nitranga in-4) : com/2qUOS59748
tony (nitranga in-1) : Fa mbola io mpanolotsaina io ihany koa anefa no nandrisika ny vahoaka ho tony amin'ny tsy famakiana afa-tsy ny vaovao omen'ireo loharano tantànan'ny fanjakana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Mong (nitranga in-1) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
renivohitra (nitranga in-1) : Mety ho tafaverin'ny tafika ihany ny fandriam-pahalemana eny an-dalàmben'i Bangkok, renivohitra, saingy vita amin'ny famotehana miandàlana ny fahalalahan'ny olom-pirenena izany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
miserana (nitranga in-1) : MT @c4sparks: fiarahabana miserana fanoherana ny fanonganam-panjakana amin'ny rantsana telo atolotr'ireo vehivavy ao amin'ny tranombarotra BKK pic. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
lalàna (nitranga in-2) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nanohana (nitranga in-1) : Na dia maro aza ny Thai nanohana ny fanonganam-panjakana, maro no manery ny tafika hanatanteraka fifidianana sy hamerina ny fahefana amin'ny vahoaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Reading (nitranga in-1) : Reading Orwell's book “1984″ at Chong Nonsi station in Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
manerena (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
sasany (nitranga in-4) : Soa ihany fa afaka sahady ny sasany tamin'izy ireo ka afaka nitantara ny zavatra niainany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Lamaody (nitranga in-1) : com/ZLaw5bnWds
— Alessio Fratticcioli (@fratticcioli) June 1, 2014 Lamaody Hunger Games. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
andro (nitranga in-3) : Sary avy amin'i Lillian Suwanrumpha, Fizakàmanana @Demotix (5/31/2014)
Suwanrumpha (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Lillian Suwanrumpha, Fizakàmanana @Demotix (5/31/2014)
ankilan' (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Gonzalo Abad, Fizakàmanana @Demotix (6/1/2014)
foana (nitranga in-1) : Nanaitra ahy fa toy ny any anaty karazana fandaharana ‘Big Brother' izany foana izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mpanohitra (nitranga in-5) : manao ny fiarahabana amin'ny rantsana telo ho fanehoana ny fahalalahana, ny fitoviana ary ny firahalahiana ireo mpanohitra ny fanonganam-panjakana any Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nametrahany (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Thay (nitranga in-2) : Ankoatra ny boky momba ny politika Thai, dia tian'izy ireo ny mamaky ny boky 1984-n'i George Orwell. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Nolazay (nitranga in-1) : Nolazain'ireo manampahefana fa nalefa any amin'ny foiben'ny mpitandro filaminana io vehivavy io mba hohadihadiana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fiarahana (nitranga in-1) : com/2qUOS59748
boky (nitranga in-5) : Tsy milanja sorabaventy ry zareo, tsy midina an-dalàmbe fa mipetraka amin'ny toerana be olona ary mamaky boky momba ny politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
tafika (nitranga in-10) : com/2qUOS59748
midina (nitranga in-1) : Tsy milanja sorabaventy ry zareo, tsy midina an-dalàmbe fa mipetraka amin'ny toerana be olona ary mamaky boky momba ny politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
lalànan' (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
fihetsiketsehana (nitranga in-4) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
finger (nitranga in-1) : MT @c4sparks: Three finger anti-thai coup salute offered fleetingly by these woman at a BKK mall pic. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
voalohany (nitranga in-1) : Nofehezin'ny tafika ny fandefasana onjam-peo sy ny fahitalavitra nandritra ny andro voalohany tamin'ilay fanonganana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mijoro (nitranga in-1) : Nisy finday roa azonay nampiasaina araka izay tianay teo fa tsy maintsy manome ny laharana ary misy olona mijoro eo akaikinay eo, mihaino rehefa miantso izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
olona (nitranga in-5) : Betsaka ireo naka ny fomba fiarahabana amin'ny fananganana rantsana telo avy tamin'ilay sarimihetsika Hollywood ‘Hunger Games' mba hilazàna ny fanirian'ny olona ho amin'ny “fahafahana, fitoviana ary firahalahiana”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Mpanoratra (nitranga in-1) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
mpanao (nitranga in-6) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
salute (nitranga in-1) : MT @c4sparks: Three finger anti-thai coup salute offered fleetingly by these woman at a BKK mall pic. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fiarahamoninaThay (nitranga in-1) : Ohatra ny hoe tian'ireo mpitandro filaminana hamafisina kokoa ny fifehezan'izy ny fiarahamoninaThai. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hamerina (nitranga in-1) : Na dia maro aza ny Thai nanohana ny fanonganam-panjakana, maro no manery ny tafika hanatanteraka fifidianana sy hamerina ny fahefana amin'ny vahoaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
alina (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
ampiharina (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
tany (nitranga in-4) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
malaza (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fanafody (nitranga in-1) : Fa raha misy tsy afaka hiara-miasa amin'ny tafika dia lazainy fa hampiasa ” fanafody henjana” ry zareo hampilamina ny toe-draharaha. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mamaky (nitranga in-3) : Tsy milanja sorabaventy ry zareo, tsy midina an-dalàmbe fa mipetraka amin'ny toerana be olona ary mamaky boky momba ny politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
anaty (nitranga in-2) : Misy lahatsary izay nanjary nalaza tato aoriana mampiseho mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana manery vehivavy mpanao fihetsiketsehana iray hiditra ao anaty fiarakaretsaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
iray (nitranga in-3) : Misy lahatsary izay nanjary nalaza tato aoriana mampiseho mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana manery vehivavy mpanao fihetsiketsehana iray hiditra ao anaty fiarakaretsaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
ataon' (nitranga in-1) : com/2qUOS59748
akaikinay (nitranga in-1) : Nisy finday roa azonay nampiasaina araka izay tianay teo fa tsy maintsy manome ny laharana ary misy olona mijoro eo akaikinay eo, mihaino rehefa miantso izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
marina (nitranga in-1) : Ohatra ny hoe mpandray anjara amin'ny fandaharana zava-misy marina Big Brother ( Razoky be) i Pravit Rojanaphruk, mpanao gazety mamim-bahoaka,:
fahazoan' (nitranga in-1) : Isan'ny toromarika voalohan'ny fitondrana mpanongam-panjakana tany Thailandy ny tsy fahazoan'ny olona maherin'ny dimy mivorivory imasom-bahoaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fandeferana (nitranga in-1) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mangina (nitranga in-1) : com/2qUOS59748
filaminana (nitranga in-5) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mampiseho (nitranga in-1) : Misy lahatsary izay nanjary nalaza tato aoriana mampiseho mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana manery vehivavy mpanao fihetsiketsehana iray hiditra ao anaty fiarakaretsaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hanafoana (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
tafavery (nitranga in-1) : Mety ho tafaverin'ny tafika ihany ny fandriam-pahalemana eny an-dalàmben'i Bangkok, renivohitra, saingy vita amin'ny famotehana miandàlana ny fahalalahan'ny olom-pirenena izany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mahazatra (nitranga in-1) : Fahitalavitra 40 no nahazo alàlana handefa ny fandaharana mahazatra azy tamin'ity herinandro ity isan'izany ny CNN, BBC ary ireo fandaharana sarimiaina fijerin'ny olona. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Mpanohitra (nitranga in-2) : com/ZLaw5bnWds
Mpanohitra ny fanonganam-panjakana manangan-tànana amin'ny fiarahabana rantsana telo, mariky ny ady. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
voalohan' (nitranga in-1) : Isan'ny toromarika voalohan'ny fitondrana mpanongam-panjakana tany Thailandy ny tsy fahazoan'ny olona maherin'ny dimy mivorivory imasom-bahoaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hohadihadiana (nitranga in-1) : Nolazain'ireo manampahefana fa nalefa any amin'ny foiben'ny mpitandro filaminana io vehivavy io mba hohadihadiana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Mety (nitranga in-1) : Mety ho tafaverin'ny tafika ihany ny fandriam-pahalemana eny an-dalàmben'i Bangkok, renivohitra, saingy vita amin'ny famotehana miandàlana ny fahalalahan'ny olom-pirenena izany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hamafisina (nitranga in-1) : Ohatra ny hoe tian'ireo mpitandro filaminana hamafisina kokoa ny fifehezan'izy ny fiarahamoninaThai. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mpanolotsaina (nitranga in-2) : Ny mahaliana dia nampitandreman'ny mpanolotsaina iray ao amin'ny fitondrana ny vahoaka fa mety hanjadian'ny ” aretin-tsaina noho ny fanjifàna vaovao marobe tafahoatra”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
miaraka (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto misy sarin'ireo mpanao fihetsiketsehana vitsivitsy tany Bangkok miaraka amin'ny fiarahabana ‘Hunger Games' :
lahatsoratra (nitranga in-1) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
lasa (nitranga in-1) : Nampanantsoin'ny tafika ireo mpianatra eny amin'ny Oniversite sy mpanao gazety an-jatony andro vitsy lasa izay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fandefasana (nitranga in-1) : Nofehezin'ny tafika ny fandefasana onjam-peo sy ny fahitalavitra nandritra ny andro voalohany tamin'ilay fanonganana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Fizakàmanana (nitranga in-2) : Sary avy amin'i Gonzalo Abad, Fizakàmanana @Demotix (6/1/2014)
fitondrana (nitranga in-3) : Isan'ny toromarika voalohan'ny fitondrana mpanongam-panjakana tany Thailandy ny tsy fahazoan'ny olona maherin'ny dimy mivorivory imasom-bahoaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
manome (nitranga in-2) : Raha misy ny manome, dia misy ny afaka mamerina. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mamerina (nitranga in-1) : Raha misy ny manome, dia misy ny afaka mamerina. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Games (nitranga in-2) : Ireto ambany ireto misy sarin'ireo mpanao fihetsiketsehana vitsivitsy tany Bangkok miaraka amin'ny fiarahabana ‘Hunger Games' :
Rojanaphruk (nitranga in-1) : Ohatra ny hoe mpandray anjara amin'ny fandaharana zava-misy marina Big Brother ( Razoky be) i Pravit Rojanaphruk, mpanao gazety mamim-bahoaka,:
fanonganana (nitranga in-2) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
sahy (nitranga in-1) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
noho (nitranga in-1) : Ny mahaliana dia nampitandreman'ny mpanolotsaina iray ao amin'ny fitondrana ny vahoaka fa mety hanjadian'ny ” aretin-tsaina noho ny fanjifàna vaovao marobe tafahoatra”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nalaza (nitranga in-1) : Misy lahatsary izay nanjary nalaza tato aoriana mampiseho mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana manery vehivavy mpanao fihetsiketsehana iray hiditra ao anaty fiarakaretsaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fomba (nitranga in-2) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
Ankoatra (nitranga in-1) : Ankoatra ny boky momba ny politika Thai, dia tian'izy ireo ny mamaky ny boky 1984-n'i George Orwell. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fampitandremana (nitranga in-1) : Mbola tena arahana akaiky ny haino aman-jery ary hentitra ny tafika amin'ny fampitandremana ny mpiserasera amin'ny aterineto tsy hitsikera ny fitondrana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Copyright (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
mivezivezy (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Heveriko (nitranga in-1) : Heveriko fa fitsapana ny hafanam-pon'izay nanatrika teo izany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
gazety (nitranga in-2) : Nampanantsoin'ny tafika ireo mpianatra eny amin'ny Oniversite sy mpanao gazety an-jatony andro vitsy lasa izay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Three (nitranga in-1) : MT @c4sparks: Three finger anti-thai coup salute offered fleetingly by these woman at a BKK mall pic. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mariky (nitranga in-1) : com/ZLaw5bnWds
niainany (nitranga in-1) : Soa ihany fa afaka sahady ny sasany tamin'izy ireo ka afaka nitantara ny zavatra niainany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mipetraka (nitranga in-1) : Tsy milanja sorabaventy ry zareo, tsy midina an-dalàmbe fa mipetraka amin'ny toerana be olona ary mamaky boky momba ny politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
loharano (nitranga in-1) : Fa mbola io mpanolotsaina io ihany koa anefa no nandrisika ny vahoaka ho tony amin'ny tsy famakiana afa-tsy ny vaovao omen'ireo loharano tantànan'ny fanjakana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
misy (nitranga in-7) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
handefa (nitranga in-1) : Fahitalavitra 40 no nahazo alàlana handefa ny fandaharana mahazatra azy tamin'ity herinandro ity isan'izany ny CNN, BBC ary ireo fandaharana sarimiaina fijerin'ny olona. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Hollywood (nitranga in-1) : Betsaka ireo naka ny fomba fiarahabana amin'ny fananganana rantsana telo avy tamin'ilay sarimihetsika Hollywood ‘Hunger Games' mba hilazàna ny fanirian'ny olona ho amin'ny “fahafahana, fitoviana ary firahalahiana”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
naka (nitranga in-1) : Betsaka ireo naka ny fomba fiarahabana amin'ny fananganana rantsana telo avy tamin'ilay sarimihetsika Hollywood ‘Hunger Games' mba hilazàna ny fanirian'ny olona ho amin'ny “fahafahana, fitoviana ary firahalahiana”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Nandika (nitranga in-1) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
Campenhout (nitranga in-1) : com/2qUOS59748
saingy (nitranga in-2) : Nampanantena ny hikarakara fifidianana ny tafika saingy aorian'ny filaminan'ny fanjakana sy fanavaozana ny rafitra politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mbola (nitranga in-1) : Fa mbola io mpanolotsaina io ihany koa anefa no nandrisika ny vahoaka ho tony amin'ny tsy famakiana afa-tsy ny vaovao omen'ireo loharano tantànan'ny fanjakana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
tato (nitranga in-1) : Misy lahatsary izay nanjary nalaza tato aoriana mampiseho mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana manery vehivavy mpanao fihetsiketsehana iray hiditra ao anaty fiarakaretsaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Lazaina (nitranga in-1) : Ohatra ny hoe mpandray anjara amin'ny fandaharana zava-misy marina Big Brother ( Razoky be) i Pravit Rojanaphruk, mpanao gazety mamim-bahoaka,:
sarimihetsika (nitranga in-1) : Betsaka ireo naka ny fomba fiarahabana amin'ny fananganana rantsana telo avy tamin'ilay sarimihetsika Hollywood ‘Hunger Games' mba hilazàna ny fanirian'ny olona ho amin'ny “fahafahana, fitoviana ary firahalahiana”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
lahatsary (nitranga in-1) : Misy lahatsary izay nanjary nalaza tato aoriana mampiseho mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana manery vehivavy mpanao fihetsiketsehana iray hiditra ao anaty fiarakaretsaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
sahady (nitranga in-2) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
maro (nitranga in-3) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
June (nitranga in-1) : com/ZLaw5bnWds
isan' (nitranga in-1) : Fahitalavitra 40 no nahazo alàlana handefa ny fandaharana mahazatra azy tamin'ity herinandro ity isan'izany ny CNN, BBC ary ireo fandaharana sarimiaina fijerin'ny olona. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
marobe (nitranga in-1) : Ny mahaliana dia nampitandreman'ny mpanolotsaina iray ao amin'ny fitondrana ny vahoaka fa mety hanjadian'ny ” aretin-tsaina noho ny fanjifàna vaovao marobe tafahoatra”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
biraon' (nitranga in-1) : Zarain'i Thanapol Eawsakul ny zavatra hitany tao amin'ny biraon'ny tafika :
ambany (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto misy sarin'ireo mpanao fihetsiketsehana vitsivitsy tany Bangkok miaraka amin'ny fiarahabana ‘Hunger Games' :
hevitra (nitranga in-1) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
tamy (nitranga in-6) : Betsaka ireo naka ny fomba fiarahabana amin'ny fananganana rantsana telo avy tamin'ilay sarimihetsika Hollywood ‘Hunger Games' mba hilazàna ny fanirian'ny olona ho amin'ny “fahafahana, fitoviana ary firahalahiana”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
taty (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Lillian Suwanrumpha, Fizakàmanana @Demotix (5/31/2014)
fahazoana (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hitsikera (nitranga in-1) : Mbola tena arahana akaiky ny haino aman-jery ary hentitra ny tafika amin'ny fampitandremana ny mpiserasera amin'ny aterineto tsy hitsikera ny fitondrana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fanoheran' (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Gonzalo Abad, Fizakàmanana @Demotix (6/1/2014)
Pattaya (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
telo (nitranga in-5) : manao ny fiarahabana amin'ny rantsana telo ho fanehoana ny fahalalahana, ny fitoviana ary ny firahalahiana ireo mpanohitra ny fanonganam-panjakana any Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Ohatra (nitranga in-2) : Ohatra ny hoe tian'ireo mpitandro filaminana hamafisina kokoa ny fifehezan'izy ny fiarahamoninaThai. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Nahita (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
hikarakara (nitranga in-1) : Nampanantena ny hikarakara fifidianana ny tafika saingy aorian'ny filaminan'ny fanjakana sy fanavaozana ny rafitra politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hanehoany (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
mihantsy (nitranga in-1) : com/2qUOS59748
anjara (nitranga in-1) : Ohatra ny hoe mpandray anjara amin'ny fandaharana zava-misy marina Big Brother ( Razoky be) i Pravit Rojanaphruk, mpanao gazety mamim-bahoaka,:
Nanaitra (nitranga in-1) : Nanaitra ahy fa toy ny any anaty karazana fandaharana ‘Big Brother' izany foana izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
googleplus (nitranga in-1) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
offered (nitranga in-1) : MT @c4sparks: Three finger anti-thai coup salute offered fleetingly by these woman at a BKK mall pic. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mivorivory (nitranga in-1) : Isan'ny toromarika voalohan'ny fitondrana mpanongam-panjakana tany Thailandy ny tsy fahazoan'ny olona maherin'ny dimy mivorivory imasom-bahoaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Raha (nitranga in-1) : Raha misy ny manome, dia misy ny afaka mamerina. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hanamafisana (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Gonzalo Abad, Fizakàmanana @Demotix (6/1/2014)
Fratticcioly (nitranga in-1) : com/ZLaw5bnWds
nandritra (nitranga in-1) : Nofehezin'ny tafika ny fandefasana onjam-peo sy ny fahitalavitra nandritra ny andro voalohany tamin'ilay fanonganana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fitsapana (nitranga in-1) : Heveriko fa fitsapana ny hafanam-pon'izay nanatrika teo izany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
2014 (nitranga in-2) : com/ZLaw5bnWds
vitsy (nitranga in-1) : Nampanantsoin'ny tafika ireo mpianatra eny amin'ny Oniversite sy mpanao gazety an-jatony andro vitsy lasa izay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
vitsivitsy (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto misy sarin'ireo mpanao fihetsiketsehana vitsivitsy tany Bangkok miaraka amin'ny fiarahabana ‘Hunger Games' :
etsy (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Gonzalo Abad, Fizakàmanana @Demotix (6/1/2014)
tian' (nitranga in-2) : Ankoatra ny boky momba ny politika Thai, dia tian'izy ireo ny mamaky ny boky 1984-n'i George Orwell. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fahalalahana (nitranga in-1) : manao ny fiarahabana amin'ny rantsana telo ho fanehoana ny fahalalahana, ny fitoviana ary ny firahalahiana ireo mpanohitra ny fanonganam-panjakana any Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
zareo (nitranga in-2) : Tsy milanja sorabaventy ry zareo, tsy midina an-dalàmbe fa mipetraka amin'ny toerana be olona ary mamaky boky momba ny politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
arahana (nitranga in-1) : Mbola tena arahana akaiky ny haino aman-jery ary hentitra ny tafika amin'ny fampitandremana ny mpiserasera amin'ny aterineto tsy hitsikera ny fitondrana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fanoherany (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
Abad (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Gonzalo Abad, Fizakàmanana @Demotix (6/1/2014)
Hunger (nitranga in-2) : Ireto ambany ireto misy sarin'ireo mpanao fihetsiketsehana vitsivitsy tany Bangkok miaraka amin'ny fiarahabana ‘Hunger Games' :
these (nitranga in-1) : MT @c4sparks: Three finger anti-thai coup salute offered fleetingly by these woman at a BKK mall pic. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
filaminan' (nitranga in-1) : Nampanantena ny hikarakara fifidianana ny tafika saingy aorian'ny filaminan'ny fanjakana sy fanavaozana ny rafitra politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Vakio (nitranga in-1) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
fiarahabana (nitranga in-6) : manao ny fiarahabana amin'ny rantsana telo ho fanehoana ny fahalalahana, ny fitoviana ary ny firahalahiana ireo mpanohitra ny fanonganam-panjakana any Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
tatitra (nitranga in-1) : Zarain'i Thanapol Eawsakul ny zavatra hitany tao amin'ny biraon'ny tafika :
fahalalahan' (nitranga in-1) : Mety ho tafaverin'ny tafika ihany ny fandriam-pahalemana eny an-dalàmben'i Bangkok, renivohitra, saingy vita amin'ny famotehana miandàlana ny fahalalahan'ny olom-pirenena izany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
raha (nitranga in-1) : Fa raha misy tsy afaka hiara-miasa amin'ny tafika dia lazainy fa hampiasa ” fanafody henjana” ry zareo hampilamina ny toe-draharaha. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fanamiana (nitranga in-1) : Misy lahatsary izay nanjary nalaza tato aoriana mampiseho mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana manery vehivavy mpanao fihetsiketsehana iray hiditra ao anaty fiarakaretsaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mall (nitranga in-1) : MT @c4sparks: Three finger anti-thai coup salute offered fleetingly by these woman at a BKK mall pic. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
politika (nitranga in-4) : Tsy milanja sorabaventy ry zareo, tsy midina an-dalàmbe fa mipetraka amin'ny toerana be olona ary mamaky boky momba ny politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nampiasaina (nitranga in-1) : Nisy finday roa azonay nampiasaina araka izay tianay teo fa tsy maintsy manome ny laharana ary misy olona mijoro eo akaikinay eo, mihaino rehefa miantso izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Alessio (nitranga in-1) : com/ZLaw5bnWds
Misy (nitranga in-1) : Misy lahatsary izay nanjary nalaza tato aoriana mampiseho mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana manery vehivavy mpanao fihetsiketsehana iray hiditra ao anaty fiarakaretsaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hitany (nitranga in-1) : Zarain'i Thanapol Eawsakul ny zavatra hitany tao amin'ny biraon'ny tafika :
mampiasa (nitranga in-1) : Ohatra ny hoe mpandray anjara amin'ny fandaharana zava-misy marina Big Brother ( Razoky be) i Pravit Rojanaphruk, mpanao gazety mamim-bahoaka,:
fanoherana (nitranga in-1) : MT @c4sparks: fiarahabana miserana fanoherana ny fanonganam-panjakana amin'ny rantsana telo atolotr'ireo vehivavy ao amin'ny tranombarotra BKK pic. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mahaliana (nitranga in-1) : Ny mahaliana dia nampitandreman'ny mpanolotsaina iray ao amin'ny fitondrana ny vahoaka fa mety hanjadian'ny ” aretin-tsaina noho ny fanjifàna vaovao marobe tafahoatra”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
firenena (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nandrisika (nitranga in-1) : Fa mbola io mpanolotsaina io ihany koa anefa no nandrisika ny vahoaka ho tony amin'ny tsy famakiana afa-tsy ny vaovao omen'ireo loharano tantànan'ny fanjakana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fahitalavitra (nitranga in-1) : Nofehezin'ny tafika ny fandefasana onjam-peo sy ny fahitalavitra nandritra ny andro voalohany tamin'ilay fanonganana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
vory (nitranga in-2) : Sary avy amin'i Gonzalo Abad, Fizakàmanana @Demotix (6/1/2014)
Yostorn (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
Razoky (nitranga in-1) : Ohatra ny hoe mpandray anjara amin'ny fandaharana zava-misy marina Big Brother ( Razoky be) i Pravit Rojanaphruk, mpanao gazety mamim-bahoaka,:
finday (nitranga in-2) : Ohatra ny hoe mpandray anjara amin'ny fandaharana zava-misy marina Big Brother ( Razoky be) i Pravit Rojanaphruk, mpanao gazety mamim-bahoaka,:
mpizahatany (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
toromarika (nitranga in-1) : Isan'ny toromarika voalohan'ny fitondrana mpanongam-panjakana tany Thailandy ny tsy fahazoan'ny olona maherin'ny dimy mivorivory imasom-bahoaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fanehoana (nitranga in-1) : manao ny fiarahabana amin'ny rantsana telo ho fanehoana ny fahalalahana, ny fitoviana ary ny firahalahiana ireo mpanohitra ny fanonganam-panjakana any Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Junta (nitranga in-1) : Maro amin'izy ireo no mpanohitra ary tsy manaiky ny Junta (fitondràna miaramila apetraka aorian'ny fanonganam-panjakana). (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Palatino (nitranga in-1) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
Games' (nitranga in-2) : Betsaka ireo naka ny fomba fiarahabana amin'ny fananganana rantsana telo avy tamin'ilay sarimihetsika Hollywood ‘Hunger Games' mba hilazàna ny fanirian'ny olona ho amin'ny “fahafahana, fitoviana ary firahalahiana”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Sary (nitranga in-3) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
hanatanteraka (nitranga in-1) : Na dia maro aza ny Thai nanohana ny fanonganam-panjakana, maro no manery ny tafika hanatanteraka fifidianana sy hamerina ny fahefana amin'ny vahoaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fanjakana (nitranga in-2) : Nampanantena ny hikarakara fifidianana ny tafika saingy aorian'ny filaminan'ny fanjakana sy fanavaozana ny rafitra politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Taorian' (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
station (nitranga in-1) : Reading Orwell's book “1984″ at Chong Nonsi station in Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
tranombarotra (nitranga in-1) : MT @c4sparks: fiarahabana miserana fanoherana ny fanonganam-panjakana amin'ny rantsana telo atolotr'ireo vehivavy ao amin'ny tranombarotra BKK pic. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mifehy (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Lillian Suwanrumpha, Fizakàmanana @Demotix (5/31/2014)
Phuket (nitranga in-1) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
hafa (nitranga in-2) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
Thailandy (nitranga in-2) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
tianay (nitranga in-1) : Nisy finday roa azonay nampiasaina araka izay tianay teo fa tsy maintsy manome ny laharana ary misy olona mijoro eo akaikinay eo, mihaino rehefa miantso izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
manaiky (nitranga in-1) : Maro amin'izy ireo no mpanohitra ary tsy manaiky ny Junta (fitondràna miaramila apetraka aorian'ny fanonganam-panjakana). (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mpitandro (nitranga in-5) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Gonzalo (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Gonzalo Abad, Fizakàmanana @Demotix (6/1/2014)
fahefana (nitranga in-1) : Na dia maro aza ny Thai nanohana ny fanonganam-panjakana, maro no manery ny tafika hanatanteraka fifidianana sy hamerina ny fahefana amin'ny vahoaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nanatrika (nitranga in-1) : Heveriko fa fitsapana ny hafanam-pon'izay nanatrika teo izany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Bangkok (nitranga in-5) : manao ny fiarahabana amin'ny rantsana telo ho fanehoana ny fahalalahana, ny fitoviana ary ny firahalahiana ireo mpanohitra ny fanonganam-panjakana any Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
samy (nitranga in-1) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
book (nitranga in-1) : Reading Orwell's book “1984″ at Chong Nonsi station in Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nahazo (nitranga in-1) : Fahitalavitra 40 no nahazo alàlana handefa ny fandaharana mahazatra azy tamin'ity herinandro ity isan'izany ny CNN, BBC ary ireo fandaharana sarimiaina fijerin'ny olona. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nisambotra (nitranga in-1) : Na dia izany aza anefa dia tsy nahasakana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana tsy hivory amin'ny toerana maro samy hafa izany, niha-tsy nisy fandeferana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana ary nisambotra izay sahy mandika io lalàna io. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Eawsakul (nitranga in-1) : Zarain'i Thanapol Eawsakul ny zavatra hitany tao amin'ny biraon'ny tafika :
akaiky (nitranga in-1) : Mbola tena arahana akaiky ny haino aman-jery ary hentitra ny tafika amin'ny fampitandremana ny mpiserasera amin'ny aterineto tsy hitsikera ny fitondrana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
milanja (nitranga in-1) : Tsy milanja sorabaventy ry zareo, tsy midina an-dalàmbe fa mipetraka amin'ny toerana be olona ary mamaky boky momba ny politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
tezitra (nitranga in-1) : Ny sasany tezitra. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
zavatra (nitranga in-3) : Soa ihany fa afaka sahady ny sasany tamin'izy ireo ka afaka nitantara ny zavatra niainany. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
azonay (nitranga in-1) : Nisy finday roa azonay nampiasaina araka izay tianay teo fa tsy maintsy manome ny laharana ary misy olona mijoro eo akaikinay eo, mihaino rehefa miantso izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
rafitra (nitranga in-1) : Nampanantena ny hikarakara fifidianana ny tafika saingy aorian'ny filaminan'ny fanjakana sy fanavaozana ny rafitra politika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Thailande (nitranga in-1) : Sary avy amin'i Lillian Suwanrumpha, Fizakàmanana @Demotix (5/31/2014)
omen' (nitranga in-1) : Fa mbola io mpanolotsaina io ihany koa anefa no nandrisika ny vahoaka ho tony amin'ny tsy famakiana afa-tsy ny vaovao omen'ireo loharano tantànan'ny fanjakana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Maro (nitranga in-1) : Maro amin'izy ireo no mpanohitra ary tsy manaiky ny Junta (fitondràna miaramila apetraka aorian'ny fanonganam-panjakana). (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Mbola (nitranga in-2) : com/2qUOS59748
firahalahiana (nitranga in-1) : manao ny fiarahabana amin'ny rantsana telo ho fanehoana ny fahalalahana, ny fitoviana ary ny firahalahiana ireo mpanohitra ny fanonganam-panjakana any Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mahazo (nitranga in-1) : Ohatra ny hoe mpandray anjara amin'ny fandaharana zava-misy marina Big Brother ( Razoky be) i Pravit Rojanaphruk, mpanao gazety mamim-bahoaka,:
Oniversite (nitranga in-1) : Nampanantsoin'ny tafika ireo mpianatra eny amin'ny Oniversite sy mpanao gazety an-jatony andro vitsy lasa izay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Thanapol (nitranga in-1) : Zarain'i Thanapol Eawsakul ny zavatra hitany tao amin'ny biraon'ny tafika :
Brother (nitranga in-1) : Ohatra ny hoe mpandray anjara amin'ny fandaharana zava-misy marina Big Brother ( Razoky be) i Pravit Rojanaphruk, mpanao gazety mamim-bahoaka,:
mitalaho (nitranga in-1) : Ny sasany mitomany ary ny sasany mitalaho. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
ireo (nitranga in-12) : manao ny fiarahabana amin'ny rantsana telo ho fanehoana ny fahalalahana, ny fitoviana ary ny firahalahiana ireo mpanohitra ny fanonganam-panjakana any Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Nisy (nitranga in-1) : Nisy finday roa azonay nampiasaina araka izay tianay teo fa tsy maintsy manome ny laharana ary misy olona mijoro eo akaikinay eo, mihaino rehefa miantso izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nanjary (nitranga in-1) : Misy lahatsary izay nanjary nalaza tato aoriana mampiseho mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana manery vehivavy mpanao fihetsiketsehana iray hiditra ao anaty fiarakaretsaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Nancy (nitranga in-1) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
hotakotaka (nitranga in-2) : Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Copyright @Demotix (6/1/2014)
Nofehezy (nitranga in-1) : Nofehezin'ny tafika ny fandefasana onjam-peo sy ny fahitalavitra nandritra ny andro voalohany tamin'ilay fanonganana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
dimy (nitranga in-1) : Isan'ny toromarika voalohan'ny fitondrana mpanongam-panjakana tany Thailandy ny tsy fahazoan'ny olona maherin'ny dimy mivorivory imasom-bahoaka. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Orwell (nitranga in-2) : Ankoatra ny boky momba ny politika Thai, dia tian'izy ireo ny mamaky ny boky 1984-n'i George Orwell. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mpiserasera (nitranga in-1) : Mbola tena arahana akaiky ny haino aman-jery ary hentitra ny tafika amin'ny fampitandremana ny mpiserasera amin'ny aterineto tsy hitsikera ny fitondrana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Fomba (nitranga in-1) : Zarain'i Thanapol Eawsakul ny zavatra hitany tao amin'ny biraon'ny tafika :
fanirian' (nitranga in-1) : Betsaka ireo naka ny fomba fiarahabana amin'ny fananganana rantsana telo avy tamin'ilay sarimihetsika Hollywood ‘Hunger Games' mba hilazàna ny fanirian'ny olona ho amin'ny “fahafahana, fitoviana ary firahalahiana”. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
nalefa (nitranga in-1) : Nolazain'ireo manampahefana fa nalefa any amin'ny foiben'ny mpitandro filaminana io vehivavy io mba hohadihadiana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Zaray (nitranga in-1) : Zarain'i Thanapol Eawsakul ny zavatra hitany tao amin'ny biraon'ny tafika :
sary (nitranga in-1) : Ireto ambany ireto misy sarin'ireo mpanao fihetsiketsehana vitsivitsy tany Bangkok miaraka amin'ny fiarahabana ‘Hunger Games' :
miaramila (nitranga in-1) : Maro amin'izy ireo no mpanohitra ary tsy manaiky ny Junta (fitondràna miaramila apetraka aorian'ny fanonganam-panjakana). (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fleetingly (nitranga in-1) : MT @c4sparks: Three finger anti-thai coup salute offered fleetingly by these woman at a BKK mall pic. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
Brother' (nitranga in-1) : Nanaitra ahy fa toy ny any anaty karazana fandaharana ‘Big Brother' izany foana izahay. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mitomany (nitranga in-1) : Ny sasany mitomany ary ny sasany mitalaho. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
haino (nitranga in-1) : Mbola tena arahana akaiky ny haino aman-jery ary hentitra ny tafika amin'ny fampitandremana ny mpiserasera amin'ny aterineto tsy hitsikera ny fitondrana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
sarimiaina (nitranga in-1) : Fahitalavitra 40 no nahazo alàlana handefa ny fandaharana mahazatra azy tamin'ity herinandro ity isan'izany ny CNN, BBC ary ireo fandaharana sarimiaina fijerin'ny olona. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
zanabolana (nitranga in-1) : Fahitalavitra maherin'ny 600 mandeha avy amin'ny zanabolana no nakaton'ny tafika. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fandaharana (nitranga in-4) : Fahitalavitra 40 no nahazo alàlana handefa ny fandaharana mahazatra azy tamin'ity herinandro ity isan'izany ny CNN, BBC ary ireo fandaharana sarimiaina fijerin'ny olona. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
facebook (nitranga in-1) : Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Nancy
herinandro (nitranga in-2) : Taorian'ny efa ho roa herinandro sahady nametrahany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manerena ny firenena, dia nanapa-kevitra ny hanafoana izany any amin'ny faritra malaza falehan'ny mpizahatany any Pattaya, Samui ary Phuket ny mpitandro filaminana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
fiantsonana (nitranga in-1) : Eo am-pamakiana ny bokin'i Orwell “1984″ eo amin'ny fiantsonana Chong Nonsi any Bangkok. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
tena (nitranga in-2) : Mbola tena arahana akaiky ny haino aman-jery ary hentitra ny tafika amin'ny fampitandremana ny mpiserasera amin'ny aterineto tsy hitsikera ny fitondrana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
tantànan' (nitranga in-1) : Fa mbola io mpanolotsaina io ihany koa anefa no nandrisika ny vahoaka ho tony amin'ny tsy famakiana afa-tsy ny vaovao omen'ireo loharano tantànan'ny fanjakana. (Thailandy : Maka Aingam-Panahy Avy Amin'ny ‘Hunger Games’ Ireo Mpanohitra Ny Fanonganam-Panjakana, mg.globalvoicesonline.org)
mg.globalvoicesonline.org – teny vaovao 328
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/22_Jiona_2014&oldid=14286470"
Voaova farany tamin'ny 22 Jiona 2014 amin'ny 21:02 ity pejy ity.